Ugu yaraan saddex qof oo ku dhimatay qarax miinada dhulka lagu aaso oo ka dhacay duleedka Kismaayo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaJubalandUgu yaraan saddex qof oo ku dhimatay qarax miinada dhulka lagu aaso oo ka dhacay duleedka Kismaayo
September 14, 2016 Puntland Mirror Jubaland, Somalia 0
Ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhimatay gaariga qaraxa la kacay oo ahaa bas.
Kismaayo-(Puntland Mirror) Ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhimatay kadib markii gaari noociisa yahay bas oo ay saarnaayeen dad shacab ah ay miinada dhulka lagu aaso ku qaraxday.
Gaariga ayaa marayay saakay oo Arbaco ah duleedka magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose markii qaraxa miinada la kacday.
Lama yaqaan cida iskaleh masuuliyada weerarkaas, balse kooxda Al-Shabaab ayaa horey u qaaday weeraro kan lamid ah.
Kismaayo ayaa laga saaray kooxda Al-Shabaab sanadkii 2012-kii, balse maleeshiyaad badan oo Al-Shabaab ah ayaa wali ku sugan hareeraha magaalada.